ဆရာမ နဲ့ ဆေးရုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဆရာမ နဲ့ ဆေးရုံ
ဆရာမ နဲ့ ဆေးရုံ
Posted by မမလေး on Sep 15, 2010 in News |2comments
နည်းနည်းတော့ကြာပါပြီ . . . ၅ လလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ အဲ့ဆရာမက Gong Zhu ငယ်ငယ်တုန်းကသင်တဲ့ဆရာမပါ ။ အရမ်းလည်းသဘောကောင်းပါတယ် ။ သရုပ်ဆောင် ပွင့် နဲ့တူပါတယ် ။ အပျိုကြီးပါ ။
မနက်စောစော ဆရာမက ၀ တော့ ရှေ့ခန်းမှာထိုင်ပြီးတော့ သွားတာပါ။ မြေနီကုန်းကနေပြီးတော့ ဆောက်လုပ်ရေးသွားမယ့်လမ်းကြောမှာ နောက်က Bus ကားနဲ့ပြိုင်မောင်းပြီး အရှိန်နဲ့ ကွေ့ထလိုက်တာ တံခါးကပွင့်သွားပြီး ဆရာမက ကားပေါ်ကပြုတ်ကျသွားပါတယ် ။ နောက်ကားပါလာရင်တတ်ကြိတ်မှာပေါ့ ။ မနက်စောစောကားနည်းနည်းရှင်းတော့ ပြူတ်ကြတဲ့ဒါဏ်ပဲရှိတာပေါ့ ။ Bus car driver ကတော့ တာဝန်ယူပေးမယ်ပြောပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမက သူ့မှာလည်း တစ်နေ့စာတစ်နေ့စားရတာ သားသမီးတွေနဲ့ဆိုပြီး တာဝန်မယူခိုင်းပါဘူး ။
ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံမှာ တစ်လလောက် ဆေးရုံတတ်လိုက်ရပါတယ်။ ခြေထောက် ကြွက်သားက အသားကြီး ပြဲသွားပြီးတော့ ပေါင်ကအသားကို ယူဖြည့်လိုက်ရတယ်တဲ့ ။ အပျိုကြီးဆိုတော့ စောင့်မယ့်လူကမရှိ သူ့တူမ Nurse ကို မနက် ၊ ည ၆၀၀၀ ပေးပြီးငှါးရပါတယ်။
Gong Zhu လည်းဆရာမကိုသွားမေးတာ အဲ့ဆေးရုံမရောက်ဖူးတော့ အဲ့ကတွေ့တဲ့လူကိုမေးကြည့်လိုက်ပါတယ်. သူတို့က လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောပြီးလိုက်ပို့ပါတယ် ။ ရောက်လည်းရောက်ရော ပိုက်ဆံတောင်းပါတယ် ။ အကြွေမပါတော့ ၁၀၀၀ ပေးပြီး ၅၀၀ ယူလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ် . သူတို့ကလည်း ၂၀၀ ပဲရှိတယ်ဆိုပြီး ၂၀၀ ပဲပေးသွားတယ် ။ ၈၀၀ ပေးလိုက်ရပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ကူညီရိုင်းပင်းမှုပေါ့နော် . ပြီးတော့လည်း လူနာချိန်မဟုတ်ရင် ( လုနာကြည့်ချိန်ကျော်ရင် ) ၀င်ကြည့်လို့မရပါဘူး အဲဒီက အန်တီကြီးပြောတာကတော့ အစောင့်ကို မုန့်ဖိုး ၁၀၀၀ ပေးရင်ဝင်လို့ရတယ်တဲ့ ။ လူနာလာမေးတာတောင် အစောင့်ပိုက်ဆံပေးရတာနဲ့ လမ်းပြတဲ့လူ ပိုက်ဆံပေးရတာနဲ့ အဲ့တော့မှပဲကြုံဖူးတော့တယ် . . .
* Bus ကားစီးရင် Lock ချပြီးမှစီးပါလို့ . တံခါးပေါက်ကို မှီပြီးမထိုင်ပါနဲ့ . တံခါးပေါက်နားမှာ မထိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲ . ကုန်ကျစရိတ် များသလို လူလည်းနာတယ် ကောင်းဘူး . . .
*ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံသွားမယ်ဆိုရင် အသိ မပါလို့ လမ်းမေးပြီးသွားရမယ်ဆိုရင် အကြွေဆောင်သွားပါလို့ . . .
အစိုးရ ဆေးရုံများ သွားရင် ငွေလမ်းခင်းရတာ ပြင်ပ ဆေးရုံများကတော့ အပြတ်ပေးရတာ တခါတည်း အပြီးဆိုတော့ စိတ်လည်း ချမ်းသာတယ် လူတွေကလည်း စည်းကမ်းရှိတယ်။ တောင်းနေရင် အလုပ်ပြုတ်မှာ စိုးရတယ်လေ။ ဆေးရုံတွေထဲမှာ အကယ်ဒမီ ဆေးရုံကို သဘောအကျဆုံးဘဲ သူက စီးပွားရေး သိပ်မဆန်ဘူး။ တခြားဆေးရုံတွေကတော့ အရမ်းစီးပွားရေး ဆန်တယ် ပိုက်ဆံ မပေးရင် အခန်းထဲတောင် ပေးမနေဘူး ပိုက်ဆံ သွားယူနေလို့ အခုလာမယ်ဆိုရင်တောင် မရဘူး။